Mendrika handefasana bilaogy ity ... Misaotra, Kathy! | Martech Zone
Fotoana kely lasa izay dia nanomboka nametraka ny rohy isan'andro tao amin'ny bilaogy tokana tao amin'ny tranokalako aho. Izany no nataoko noho ny antony roa:
Tsy nanana na inona na inona hanampiana ilay resaka aho fa tena tiako ny hahitan'ny mpamaky ireto 'firavaka' kely ireto.
Tsy te hamerina hamerina izay efa nosoratan'ny olon-drehetra aho. Tsy azoko lazaina aminao ny mahasosotra azy sy ny handehanako mamaky feed 100 amin'ny mpamaky ahy alohan'ny iPhone, iPhone ary post-iPhone. Raha regurgitation fotsiny izany dia atsipazo ny rohy dia vita miaraka aminy.
Mbola tsy naheno fitarainana momba ireo rohy aho - tena tsara daholo ny hevitra rehetra. Manantena aho fa tianao ity fomba ity hampitaako ny vaovao raisiko.
Hafa ihany anefa ity lahatsoratra ity. Tsy afaka manondro azy fotsiny aho raha tsy misy naoty. Amin'ireo bilaogy rehetra noresahiko tamin'ny tranokalako, Mamorona mpampiasa mankafy dia iray amin'ireo tiako indrindra.
Ity misy ohatra tsotra iray momba ny herin'ity bilaogy ity, namintina izay iadivako sy iasako isan'andro i Kathy Sierra amin'ny asako manontolo andro miaraka amin'ny sary tsotra roa:
Amin'ny fivoaran'ny endri-javatra:
Ary amin'ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny marimaritra iraisana:
Naneho hevitra momba bilaogy be dia be aho saingy nanalavitra ny fampifandraisana ilay toe-javatra nahatsiravina izay nahitany an'i Kathy. I Kathy no lasibatry ny lahatsoratra sy fandrahonana nahatsiravina sy nampatahotra tamin'ny tranonkala iray hafa. Tsy te hametraka teny ao am-bavan'i Kathy aho fa raha ny fitsarako ny asa sorany dia nanova ny zava-drehetra izany. Tsy azoko an-tsaina fotsiny hoe nanao ahoana izany ary ny eritreritro sy ny vavako dia miaraka amin'i Kathy.
Miala amin'ny famahanam-bolongana i Kathy noho ny fielezana betsaka aterak'izany. Betsaka ny olona no manery an'i Kathy hanohy amin'ny bilaoginy saingy tsy hitako izay. Malala-tanana tokoa i Kathy tamin'ny bilaoginy, nahagaga. Ny atin'ny bilaogy dia nety ho namboarina tamina fanontana iray na roa Loha aloha boky, fa kosa ireo eritreritra mahafinaritra ireo dia nomena maimaim-poana.
Misaotra, Kathy! Raha ny manampy na manova olona tokan-tena amin'ny bilaoginao no nifantohanao dia naharesy ahy ianao. Manantena ny fitiavanao manaraka aho! Tiako ny mahita anao manangona ny mombamomba anao rehetra ao amin'ny bilaoginao ho lasa boky mahafinaritra… angamba azonao atao ny manana tranokala modely fanoratana mihidy na gazety izay mitohy ary manome anao ny fiarovana mendrika anao.
Angamba torolàlana ho an'ny Head Start amin'ny fampivoarana sy fitantanana ny vokatra lozisialy? Aza hadino ny mampiditra ireo sary 2 ireo - mitantara ny zava-drehetra izy ireo!
Apr 8, 2007 amin'ny 12: 54 AM
Tsy afaka nifanaraka intsony. Ny bilaogin'i Kathy dia iray amin'ireo voalohany nisoratra anaranako, ary voaporofo fa vatosoa izy io hatramin'izay. Tsaroako ny namaky lahatsoratra tsy latsaky ny ampolony ary lasa “wow” avy hatrany. Iray amin'ireo bilaogy izay tsy mitsahatra mampitolagaga anao amin'ny halalin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny fampiasana rindrambaiko izy io.
Raha ny marina, tena tezitra mafy aho tamin'izay nanao an'io ka nahatonga an'ity farany. Heveriko fa ny hany azontsika atao izao dia ny mikaroka ireo zavatra taloha ary mianatra, toy ny nataonao teto.